Layma's World: အရူးများမဖတ်ရ…ဖတ်သူများမရူးရ…(၁)
Posted by Layma at 3:41 PM
အရူး (၄)…နှင့် (၅) ကို စောင့်နေပါတယ်။
လေ့လာရေးက ဘယ်မှာ ကွင်းဆင်းတာလဲဟင်။ နောက်တစ်ခါ သိုးလေးကိုလည်း ခေါ်ပါ...
လေးမရေ.. အရူး (၂) နဲ့ (၃) ကြိုက်တယ်ဗျို့း)
(ဘောလုံးတစ်လုံးကို လူ ၂၀ က၀ိုင်းလုပြီး ၂ ယောက်က အပေါက်က စောင့်နေကြတယ်)
== အဟား ဒါဖတ်ပြီး ရီနေတယ် ။
ဇနိ……စောင့်သွားတာကျေးဇူး…. အရူးစပယ်ရှယ်လစ်လို့အော်သွားတာလဲ ကျေးဇူး….။
နှင်းနှင်း……အရူး ၁ အတွက် တာမွေ အ၀ိုင်းနားမှာကွင်းဆင်းပြီး… ၂ အတွက် TV မှ sport channel မှာလေ့လာပါတယ်… ၃ အတွက်တော့ ဒညင်းကုန်းဂေါက်ကွင်းသို့အလည်အပတ်ထွက်ခြင်း နဲ့golf game ကစားခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတ စုဆောင်းပါတယ်…. နောက်ဆိုရင် သိုးလေးကို ခေါ်ပါ့မယ်…။
မဂျစ်….. ဟုတ်ပ…မဂျစ်ရယ်…. ရူးပ….ရယ်စရာကောင်းပ….နော်….။